Iminka ayaa la geleyaa xaaladdii ugu culseeyd - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Iminka ayaa la geleyaa xaaladdii ugu culseeyd
La daabacay fredag 22 mars 2013 kl 15.47
Howshii ugu adkayd ayaa iminka hor taala
Ingvar Carlsson, hogaamiyihii hore ee Iswiidhen. Sawirle: Maja Lagercrantz/Sveriges Radio.
Waa dhabbo cusub oo tallaabo horey looga qaadey sidii lagu gaari lahaa habka nidaamka dimoqoraadiyadda ee dalka Turkiga, sidaa waxaa horay u sheegay wasiirka arrimmaha dibadda ee dalka Iswiidhen Carl Bildt, mar uu ka faalloonayay tallabadii uu qaaday hogaamiyaha jabhadda hubeeysan ee Kurdida Abdullah Öcalan iyo in la sameeyo xabad-joojin. Sidoo kale waxaa isaguna soo dhoweeyay go'aanka xabad-joojinta madaxii hore ee dawladda Ingvar Carlsson.
Isagoona dhowaan wax ka saxiixey baaq ey soo saareen hogaamiyeel caalamka horey uga talin jirey oo ku baaqay iney miiska wada-hadalka ku wada fariistaan labada garab ee iska soo horjeeda. Waana mid uu rajo wanaagsan ka qabo, sidii loogu guuleeysan lahaa:
- Aad iyo aad ayaan ugu farax-sannahay in tallaabadaa la qaadey. Waa halka loo baahan yahey in laga bilaabo sidii natiijo wanaag-san looga gaari lahaa. Dhanka kale waa mid loo baahan yahay in la ogsoonaado in tallaabadani tahay middii ugu horeeysey loona baahan yahay tallaabooyin adadag oo horey loogu qaado inta laga gaareyo natiijada aan jeclaan laheyn inay ku dhammaato.
Bishii deiseembar ayey ahayd kolkii uu Ingvar Carlsson qalinka kula duugey dhambaal wadaadka ugu sarreeya ee Tibet Dalai Lama, wadaadka Desmond Tutu oo u dhashay koonfurta Afrika, madax-weynihii hore ee dalka Mareeykanka Jimmy Carter, midkaasina oo loogu baaqey iney miiska wada-hadalka isugu yimaadaan maamulka dawladda Turkiga iyo jabhadda PKK. Wada-hadalkaasina oo burburey sannadkii 2009.
Hogaamiyaha jabhadda PKK Abdullah Öcalan oo xabsiga ku jiray illaa iyo sannadkii 1999, isagoona shalay ku baaqay xabad-joojin, waa sida xaaladdu iminka tahay. Dhanka kale waxaa xaaladdii ugu adkayd ayaa iminka bilaabmi doonta, sida uu sheegay Ingvar Carlsson.
Waa mid loo fadhiyo in loo baahdo iney gacan ka geeystaan waddammada dhaca waqooyiga Yurub iyo dalkan Iswiidhen wada-hadallada labada garab, sida uu sheegay Ingvar Carlsson.
Sannadkii 1984 ayay ahayd kolkii ay jabhadda hubeeysan ee PKK bilooday dagaalka hubeeysan oo ey kula jirtay dalka Turkiga, iyadoona u ololeeynaysay sidii ey xoriyad ku gaarsiin lahayd qowmiyadda kurdida iyo sidii culeeyska looga qaadi lahaa. Qaasatan marka laga hadleyo isticmaalka luuqaddooda ee dugsiyada laga mamnuucey tusaale ahaan. Qiyaastii 6% ayaa asal ahaan ayaa bulshada ku dhaqan dalka Turkiga u dhashey qowmiyadda kurdida.